Gurukota rezvedzidzo VaLazarus Dokora
Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kushushikana nehurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuisa zvidzidzo zvitsva muzvikoro panotanga kotoro yegore rinouya asi pasina kuwedzerwa varairidzi.
Mutungamiri wePTUZ, Doctor Takavafira Zhou, vanoti vakaziviswa kuti kutanga 2017 zvidzidzo zvinoti Political Economy neEconomic History zvinenge zvodzidziswa muzvikoro zvesekendari.
Asi vanoti hurumende haina zvayakazivisa pamusoro pevarairidzi vachadzidzisa zvidzidzo zvitsva izvi, zvichireva kuti varairidzi vari kudzidzisa History pari zvino ndivo vanenge votakuriswa mutoro uyu.
Doctor Zhou vanoti chimwe chinovashungurudza ndechekuti hurumende inongoramba ichiita zano ndega mune zvinhu zvinobata varairidzi pamwe nevadzidzi, panzvimbo yekuti varovane masoro kubva pazvinorongwa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzweyi hurukuro yataita naDoctor Zhou pamusoro penyaya iyi.